Mont Blanc: astaamaha, cilmiga dhulka iyo noolaha | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 17/02/2021 10:33 | Geology
Meesha ugu sarreysa Galbeedka Yurub iyo mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee Alps oo dhan waa Mont Blanc. Waxay la macno tahay buur cad oo faransiis ah waxayna ku taal bartamaha muuqaal aad u qurux badan galbeedka Caucasus waxayna deris la tahay glaciers badan oo quudiya dhamaan webiyada hareeraheeda ah. Ahaanshaha buur ay aad ugu baahan yihiin dadka buurta fuula, waxay noqotay mid ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno dhammaan astaamaha, cilmiga dhulka iyo asalka Mont Blanc.
2 Qaab dhismeedka Mont Blanc
3 Dhirta iyo xayawaanka Mont Blanc
Waxaan ognahay in buurta fuula ay tahay waxqabad caadi ah oo kajira buuraha. Waana tan Mont Blanc waa waxqabad aad u soo noqnoqda. Gaar ahaan inta lagu jiro bilaha xagaaga waxaad arkeysaa tiro badan oo fuula iyo buurleyda oo isku dayaya inay gaaraan shirka. Kuwii ugu horreeyay ee heer sare gaadha waxay ahaayeen waxay kala ahaayeen Jacques Balmat iyo Michel Gabriel Pacard sanadkii 178626 sano kadib cilmiga cilmiga dhulka iyo cilmiga dabiiciga Horace-Bénédict de Saussure ayaa ku dhawaaqay abaalmarin aad u sareysa qofkasta oo ku guuleysta. Ujeedada aqoonyahan cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga ahayd cilmiga ah cilmiga dhul ah ah ah ah 'ah' ah (geologist) iyo ujooddaba waxay ahayd inuu awood u yeesho inaad xisaabiso dhererka ugu sarreeya ee xilligan ugu sarreeya Si loo fuliyo daraasadahaas, wuxuu u baahday buur fuul si uu u gaaro meesha ugu sarreysa.
Mont Blanc waxay ku taal xadka u dhexeeya Faransiiska iyo Talyaaniga iyo galbeedka buuraha Caucasus. Waxay ka tirsan tahay buuraha Alps waxayna ku fidsan tahay dhulka Switzerland. Waxay leedahay astaamo taasna waxay tahay inay leedahay meesha ugu sarreysa ee haramka ah. Meesha ugu sarreysa waxay ku taal koonfur-bari Faransiiska. Dhererka ugu sarreeya ee ugu sarreysa waa 4809 mitir oo ka sarreeya heerka badda. Sidaa darteed, waxay caqabad ku noqoneysaa buuroley badan oo isku daya inay gaaraan kulankooda inta lagu jiro xilliga xagaaga.
Sidii la filayay, in kasta oo ay tahay xagaa, haddana shir-weynaha waxaa lagu daboolay lakab baraf iyo baraf wata. Oo dhumucdiisuna wuxuu ku yidhi dhamaadka ilaa kala duwan yihiin sida ay xilli. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay baraf daba dheeraada. Tani waxay ka dhigeysaa dhererka la xisaabiyay ee buurta inaysan ahayn mid gebi ahaanba sax ah. Tani waxay ku dhacdaa dhawr meelood oo sare oo lagu daboolo barafka. Inta lagu gudajiro 'Mont Blanc massif' waxaan helnaa dhowr cidhif iyo mid ka mid ah dhaadhacyada ugu dhaadheer ee buuraha ka jira qaaradda Yurub. Geedkan toosan wuxuu ka dheer yahay 3.500 mitir.
Muhiim uma aha oo keliya kuwa buuraha iyo quruxda muuqaalka muuqaalka, laakiin sidoo kale waxaa jira dooxooyin badan oo hoy u ah tiro badan oo ubaxyo iyo xayawaanno ah oo ku yaal dhaadheer ee massif. Waxaa jira dhowr baraf oo xaalufinaayay qeyb ka mid ah dhaadhaca. Glacier-ka ugu weyn waa Mer de Glace. Waa barafka ugu weyn Faransiiska waxaana loo tarjumay badda barafka.
Qaab dhismeedka Mont Blanc
Waa buur leh in ka badan 300 milyan oo sano. Si kastaba ha noqotee, ereyga ballaadhan ee lagu dhammaystirayo dhammaan qaabkiisa gebi ahaanba qiyaastii 15 milyan oo sano ka hor. Qaab dhismeedka ayaa gabi ahaanba laalaabmay tan iyo markii la aasaasay waxaa sabab u ah laalaabka qolofta dhulka oo ay ugu wacan tahay dhaqdhaqaaqa gudaha meeraha. Maaddaama taarikada badda iyo qaaraduba leeyihiin qaybo kala duwan dhammaadka barakicinta midkoodna kan kale ayaa ka dhigaya inay ku qalalan yihiin safafka buurahan.
Waqtigaas inta lagu gudajiray sameynta Mont Blanc, Pangea waxay ahayd midda kaliya ee qaaradda. Waxaan ka hadlaynaa xilligii Paleozoic. Waa halkan halka qaaradda ay bilaabeen inay dillaacaan aakhirkiina u kala qaybsamaan dhul ballaaran. Hawlaha ka dhacaya gudaha meeraha ma istaagin waqti kasta. Waa in maskaxda lagu hayaa in farsamada saxanka tectonics-ka ay wali shaqeyneyso maanta. Sababtaas awgeed, muddadii malaayiin sano ahayd, dhaqdhaqaaqyadu waxay ku sii socdeen inay ka dhacaan dhulka hoostiisa oo curiyay Mont Blanc.
Horeba dhamaadka Muddada Cretaceous, saxanka Apulian iyo saxanka Eurasia waxay bilaabeen inay isku dhacaan. Shilkan taarikada tectonic wuxuu sababay qolofka jajabyada iyo dhagxaanta dhalada inay ku kacaan qaab isku laaban. Mont Blanc ayaa loo maleynayaa waa wax aan ka badnayn qayb ka mid ah dhagax weyn oo ka soo baxa badda dhexdeeda. Isugeynta guud ahaanteed gebi ahaanteed ayaa sare u kacday sababtoo ah cadaadiska ay saareen saxanka Afrika intii lagu jiray 100 milyan ee sano ee la soo dhaafay.
Qeybaha hoose ee dhagaxa ah waxay ahaayeen nooc dhagax ah oo sameeyay Mont Blanc. Qeybaha hoose waxaa laga sameeyay lakabkii dhagaxa sababo la xiriira cadaadiska ay saareen taarikada tectonic. Tani waxay sababtay buurta inay yeelato cirif cufan oo ka dhashay nabaad-guurka nuucyada kala duwan ee barafka. Isku soo wada duuboo, qaabka muuqaalka ah ee waxaas oo dhami wuxuu siiyay qaab fidsan oo mindi lagu xasuusto.
Dhirta iyo xayawaanka Mont Blanc
In kasta oo buurtani ay leedahay qurux weyn oo leh muuqaal baraf leh, haddana sidoo kale waxay leedahay kala duwanaansho fiican oo leh cagaarka cagaaran ee ku xeeran. Kaliya waa lagama maarmaan in la arko in dhammaan meelaha aagga cagaaran ay ku jiraan noocyo badan oo xayawaan iyo dhir ah. Qaar badan oo ka mid ah noocyada booqda buuraha kala duwan ayaa wajaha joogga, kuleylka hooseeya iyo aashitada ciidda. Sidaad filan karto, ku noolaanshaha aaggan ayaa aad ugu adag kala duwanaanshaha noolaha halkan ku nool. Si kastaba ha noqotee, la qabsashada iyo horumarka ayaa macnaheedu yahay in dhammaan noocyada nooli ay sii noolaan karaan.
Guga iyo xagaaga qaar ka mid ah noocyada dhirta ubaxyada, cowska iyo dhirta kale ee yaryar ayaa ka soo baxa qaybta hoose ee buurta. Qeybtaan hoose waxay xoogaa aad ugu fiican tahay xaaladaha deegaanka ee noocyada. Agagaarka massif-ka waxaan ka heli karnaa suufyada sida firska iyo larches. Noocyada qaar sida Ranunculus glacialis ayaa noolaan kara ilaa 4.000 mitir sare.
Xagga xayawaanka, waxaan aragnaa inay matalaan chamois, deerada cas, dawacooyinka cas, dhibcaha badda, balanbaalisyada, gorgorka dahabiga ah, aboorka iyo noocyada qaar ka mid ah caaro iyo hangarallayaal. Dhammaantood kuma wada noola buuraha sida oo kale, laakiin qaar baa awood u leh inay fuulaan joogga meelaha u jiro baraf keliya. Waxay yihiin joog sare oo qiyaastii ah 3.500 mitir.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto Mont Blanc iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Mont Blanc
Qaab dhismeedka Dhulka